Xog: Beelahee kasoo jeedaan xildhibaanada ugu badan ee kasoo horjeedo ansixinta wasiirada? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Beelahee kasoo jeedaan xildhibaanada ugu badan ee kasoo horjeedo ansixinta wasiirada?
Xog: Beelahee kasoo jeedaan xildhibaanada ugu badan ee kasoo horjeedo ansixinta wasiirada?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa Magaalada Muqdisho ka socdo ololihii ugu weynaa ee looga soo horjeedo ansixinta Golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre, waxayna hadda xaaladda mareysaa meel aad u xun oo laga yaabo in dib loogu laabto wasiirada.
Haddaba waxaa ilaa hadda la hubaai nay 135 Xildhibaan si rasmi ah uga soo horjeesteen wasiirada la magacaabay, waxaana idiin heynaa xildhibaanada ugu badan ee kasoo horjeedo maamul Goboleedka ay kasoo jeedaan.
Sida xogta aan ku heleyno Maamulka Koonfur Galbeed ayey kasoo jeedaan Xldhibaanada ugu badan ee kasoo horjeedo ansixinta golaha wasiirada cusub, waxaana la sheegayaa inuu arrintaas ka dambeeyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari.
Jawaari ayaa la sheegay inay madaxwyenaha iyo Ra’isulwasaaraha u diideyn in liiska wasiirada loogu daro Fargeeto oo uu la doonayey in laga dhigo wasiirka Maaliyadda ama Wsiirka Arrimaha Dibadda.
Sidoo kale waxaa kusoo xigo Xildhibaanada kasoo jeedo Maamulka Puntland oo ah xildhibaano dhawr ah, waxaana ka go’an sidii loo ridi lahaa wasiirada cusub haddii la horkeeno Baarlamaanka.
Dadka Falanqeeyo siyaasadda ayaxa aamin in gadoodkaan ay sameeyeen Xildhibaanada Maamul Goboleedyada Koonfur Galbeed iyo Puntland ay ugu wacan tahay maadama ay qaadan waayeen in Beesha Hawiye la siiyo ilaa 6 Xildhibaan halka beelaha kale la siiyey 5 wasiir.
Waxay tilmaameyn inaan fasiraad dhab ah loo heyn sababta keentay in Beesha Hawiye la siiyo wasiir dheeri, taasina aysan macquul aheyn, waxayna ku baaqeyn xildhibaanadaas in wasiirada la waafajiyo habka 4.5 oo ay Soomaalida wax ku qeybsato hadda.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa looga fadhiyaa go’aan cad oo ku aadan wasiirada uu soo magacaabay maadaama uu Guddoomiyaha Baarlamaanka Prof. Jawaari ugu baaqay inuu isbadal ku sameeyo, isagoo xusay inay soo gaareyn cabasho aad u badan oo ka timaaday Xildhibaanada Baarlamaanka.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa hadda ku maqan Safar xagga Nairobi ah isagoo ka qeybgalayo shirka Nairobi uga furmay madaxda IGAD kaasoo looga hadlayo arrimaha xaqootiga, waxaana la filayaa inu si deg deg ah kusoo gaaro Muqdisho maadaama uu dhamaaday shirkaas.
Madaxweynaha ayaa la filayaa inuu soo farageliyo arrintaas isla markaasna uu kulan la qaato Ra’isulwasaaraha Iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka si looga wadahadlo sidii looga gdubi lahaa xaalad adag ee soo wajahday wasiirada la magacaabay.